I-China Donut Slide Production kanye neFektri | Izinsimbi Zokudlala zeHaiberi
IDonut Slide ivumela izingane ukuthi zithole injabulo yokushushuluza nge-ski ring enkundleni yokudlala yangaphakathi. Njengenye yezinto ezaziwa kakhulu enkundleni yokudlala yezingane, izingane zingashona phansi kaninginingi futhi zikujabulele!
I-Donut slide ingumkhiqizo oyinselele kakhulu ezinganeni, ezidinga ukusebenza kanzima ukuze zifinyelele phezulu, futhi zijabulele injabulo ephindwe kabili lapho wehlela phansi.
Isilayidi seDonut senziwa ngezinto ezisezingeni eliphakeme nezingapheli, kanti impahla nokwakheka kuhambisana ngokuphelele nezindinganiso zokuphepha. Idizayini yemidlalo ye-gameplay inengqondo ukunciphisa umthwalo wokusebenza kwakho.
Esedlule: Inkundla yokudlala yomjaho wangaphakathi
Olandelayo: Indawo yokudlala iVolcano Slide Indoor